Afaka Manaisotra Ny Marika Borat-n’i Kazakhstan Ve i Sabina Altynbekova? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Marsa 2015 3:30 GMT
Nambabo ny fon'i Japana hatrao Filipina sy ny hafa manodidina azy ireo ilay tanora Sabina Altynbekova, mpikambana lava ranjanana sady manintona mpilalao volleyball avy ao Kazakhstan raha nilalao nandritra ny fifaninanana iraisampirenena tao Tapei, Taiwan tamin'ny fahavaratra lasa teo. Hoan'ireo mpanara-baovao maro momba ny fironam-pitiavana an'i Sabina, anisan'izany ny ray aman-dreniny, dia lasa toa tafahoatra aza izany.
Mety mahatsapa ny fametrahana mariky lalao ihany ankehitriny i Sabina, ary sarotra ihany ny tsy hanao izany. Nahatratra 250.000 ny isan'ny mpanjohy azy tao amin'ny Instagram raha nanoratra momba azy nandritra ny fotoana nampalaza indrindra ny fanarahana ny vaovaon'i Sabina ny Global Voices ary mahatratra 400.000 mahery izany ankehitriny. Mipetraka ao amin'ny Instagram ihany koa ny mailaka sabina.manager@gmail.com izay voalaza fa an'olona mikarakara ireo endrim-pamataranandro Soisa [anaovany] sy ny fitsidihana ireo mpankafy mahafatifaty.
Raha toa tafahotra ity fanehoan-kevitra farany sy ny hafa tahaka izany, dia tokony hotsarovana fa hoan'ny olona mankahala ny Borat, dia tsy inona tsy akory ilay sarimihetsika hala-tahaka maneso fa famelezan'ny mpanavakavaka izay namaritra ny Kazakhs ho mitoka-monina, mpijangajanga mpamely havaka akaiky, mpankahala jiosy (antisémites) ary ny ambiny mifanakaiky amin'izany. Raha nanao sarimihetsika momba ny mponina avy ao Nizeria, Jordania, Isiraely na Romania (izay nanaovana ny horonantsary) i Baron Cohen dia ho niharan'ny fahatezerana Iraisampirenena izy. Ny tsy fahalalàna no mahatonga an'i Azia Afovoany ho lasibatr'izay rehetra tonga, sady miaro ireo sangany ara-politika sy ho tratran'ny fanaraha-maso amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona.